Saddex bil oo lagu kordhiyay howlgalka la dagaalanka burcadeeda xeebaha Soomaaliya - Jowhar somali news leader
By Master	 On Dec 4, 2021
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa muddo saddex bil ah ku kordhiyay howlgalka la dagaalanka burcad badeeda xeebaha Soomaaliya.
Fadhi uu yeeshay Golaha Ammaanka ayaa warbixin looga dhageystay wadamada ku bahaboohay Ciidamada ilaaliya Biyaha Caalamiga ee Xeebta Soomaaliya.
Xilliga Doorashada guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka oo la…
Soomaalida oo lagu weerarayo dalka Turkiga oo ay ka jirto…
Kulanka Golaha Ammaanka ayaa waxaa ka qeybgalay Danjiraha u fadhiya Qaramada Midoobay Abuukar Daahir Cismaan (Abuukar Baalle) isagoo soo bandhigay macluumaadka howlgallada la dagaalanka burcadda iyo heerka halistooda maanta ay joogto.
Danjire Abuukar ayaa sheegay in 4tii sanno la soo dhaafay aanay jirin afduub ama weerar ay sameeyeen kooxaha burcad badeeda sidaas awgeed Dowladda Federaalka ay dalbaneyso in si kale looga faaiideysto howlgalkaan.
Golaha Ammaanka ayaa cod aqlabiyad leh ugu codeeyay in Ciidamada caalamiga ah loo kordhiyo Saddex bil (90 Cishe) si howlgalkooda la dagaalanka Burcad badeeda lagu qiimeynayo heerka ay gaarsiisan tahay awoodda Kooxaha wax afduubta.
Guddiga Hirgelinta Doorashada Koofurgalbeed oo shaaciyay qabashada 5 kursi oo Golaha…
Sharma’arke oo beeniyay inuu ka mid ahaa siyaasiyiin go’aan ka soo…
Hanjabaadii labaad muddo ku dhow 24 saac gudahood oo Maraykanku ka soo saaray…
Russia sees no reason to resume talks on Ukraine crisis, threatens measures after…
Germany sentences a former Syrian officer to life in prison for crimes…
France is pressuring the EU to agree on sanctions against Mali, in…
Russian-led troops begin withdrawing from Kazakhstan following deadly…
The United States is introducing new sanctions against North Korea due…
“Be My Baby” singer and girl group icon Ronnie Spector…
The French Senate approves the abbreviated version of the…